BAL ka feker dhakhtar cusub oo u soo guuray degmadaada. Markii ugu horreysay malaha waxaa is tiri dhakhtarkan la ma aammini karo. Laakiin haddii saaxiibbadaa soo booqdaan dhakhtarkan oo kaddibna caafimaadkoodu aad u fiicnaado miyaanad is oran lahayn waa inaan dhakhtarkan aado?
Sida dhakhtarkaas laga shakiyay oo kale, qaar baa iska ilaaliya inay talo weyddiistaan Qorniinka Quduuska ah. Laakiin markay isticmaalaan talada xigmadda leh oo ku dhex jirta Qorniinkaas, noloshoodu aad bay u fiicnaataa. Masaallahan bal fiiri.
Xallinta dhibaatooyinka guurka
Sumiatun naag la dhaho baa tiri: “Guurkayga bilowgiisa waxaan dareemay inuu ninkaygu i dayacay. Anigoo ciil i hayo baan caayi jiray ninkayga, oo waxay gacantaydu qabsato baan ku tuuri jiray, waana dili jiray. Marmar markay cadhadu iga badato baan suuxi jiray.
“Markuu ninkaygu Dumas bilaabay inuu barto Qorniinka Quduuska ah waan ku qoslay. Laakiin anigoo qol kale ku jira baan si qarsoodi ah u dhegeysan jiray waxbarashadiisa. Maalin maalmaha ka mid ah anigoo isaga dhegeysanaya baan aayadahan maqlay: ‘Dumar yahow, nimankiinna ka dambeeya sidaad Rabbiga uga dambaysaan . . . Afaduna ninkeeda ha maamuusto.’ (Efesos 5:22, 33) Kelmedahaas qalbigayga bay taabteen. Ilaahay baan weyddiistay inuu iga cafiyo xumaanta aan ninkayga u geystay. Oo waxaan weyddiistay Ilaahay caawintiisa sidaan naag fiican u noqdo. Waqti yar kaddib aniga iyo Dumas waxaan bilownay inaan isla baranno Qorniinka Quduuska ah.”
Dumas iyo Sumiatun
Weliba Qorniinka Quduuska ahna waxaa ku qoran: “Nimanka waxaa ku waajib ah inay afooyinkooda u jeclaadaan sida jidhkooda oo kale.” (Efesos 5:28) Sumiatun waxay tiri: “Waxyaalahaan barannay si dhab ah bay noo taabteen. Waxaan bilaabay inaan ninkayga Dumas markuu shaqada ka yimaaddo koob shaah ah u keeno oo inaan si raxmad leh ula hadlo. Dumasna kalgacayl buu i tusay wuxuuna bilaabay inuu hawsha guriga ila qabto. Waxaan ku wada dadaalnay inuu midkeenba midka kale u roonaado, oo u qalbi jilicsanaado, annagoo iscafinayna. (Efesos 4:32) Sidaa daraaddeed ixtiraamkayagii iyo jacaylkayagii baa kordhay. Hadda 40 sanadood ka badan baan is qabnaa oo farxad baan ku nool nahay. Talada xigmadda leh uu Erayga Ilaahay na siiyay baa badbaadisay guurkayaga!”
Ka adkaada cadhada
Nin magaciisu Tayib yahay baa yiri: “Cadho dulmi badan baan lahaa. Waan dagaallami jiray oo qori baan dadka kaga cabsiin jiray. Naagtayda Kustriyah waan dili jiray oo cadho awgeed baan u kala tuuri jiray. Dad badan baa iga cabsan jiray.
Kustriyah iyo Tayib way isla tukadaan habeen kasta
“Maalin waxaan akhriyay wuxuu Ciise yiri: ‘Waxaan idin siinayaa qaynuun cusub oo ah, waa inaad isjeclaataan; sidaan idiin jeclaaday.’ (Yooxanaa 13:34) Erayadaas qalbigay i taabteen oo waxaan goʼaansaday inaan isbeddelo. Markay cadho igu abuuranto Ilaahay baan degganaansho ka baryi jiray. Waqti yar kaddib cadhadu way iga baabbiʼi jirtay. Aniga iyo naagtaydu talada ku jirto buugga Efesos 4:26, 27 baannu hirgelinnay: ‘Qorraxdu yay idinka dhicin idinkoo cadhaysan. Ibliiskana meel ha siinina.’ Habeen kasta aniga iyo naagtaydu waxaan akhrisannay Qorniinka Quduuska ah, oo Ilaahay baan weyddiisannay caawintiisa. Markaan sidaa yeelnay waxaa ina dhaafay welwelkii maalinta, oo waan midownay.
“Hadda waxaa la ii yaqaannaa nin qabow. Naagtaydu iyo carruurtaydu way i jecel yihiin wayna i xushmeeyaan. Saaxiibbo badan baan leeyahay waxaanna dareemaa inaan Ilaahay u dhowahay. Nin si dhab ah u faraxsan baan ahay.”
Ka guuleysashada isticmaalka mukhaaddaraadka
Goin nin la dhaho baa yiri: “Waxaan raaci jiray dhallinyaro ciyaalo suuq ah, sigaarkana si xun baan u cabi jiray. Habeen kasta anigoo sakhraansan baan dariiqa ku suuxi jiray. Welibana xashiishadda iyo mukhaaddaraad kale baan iibin jiray oona isticmaali jiray oo waxaan ku qarin jiray jaakaddayda xabbadda iga dhawrta. Inkastoo aan u ekaa oo iska dhigi jiray qof khatar ah maalin kasta cabsi baan ku noolaa.
“Markaas qof baa i tusay aayaddan: ‘Wiilkaygiiyow, waxbariddayda ha illoobin . . . Waayo, iyagu waxay kuu kordhin doonaan maalmo badan iyo cimri dheer iyo nabad.’ (Maahmaahyadii 3:1, 2) Anigu aad baan u rabay cimri dheer oo nabad leh! Oo aayaddan kalena baan akhriyay: ‘Haddaba, gacaliyayaalow, innagoo ballamadan haysanna, aan iska safayno nijaas kasta oo jidhka iyo ruuxa ku jirta, innagoo quduusnimada kaamilayna oo Ilaah ka cabsanayna.’ (2 Korintos 7:1) Sidaas daraaddeed waan iska daayay mukhaaddaraadkii waana ka haray mooryaantii oo waxaan bilaabay inaan Ilaahay u adeego.
“Imminka 17 sanadood mukhaaddaraad ma isticmaalin. Hadda waxaan haystaa caafimaad fiican, reer faraxsan, saaxiibbo wanaagsan iyo qalbi daahir ah. Habeen kasta intaan jidka anigoo sakhraansan jiifi lahaa baan sariirtayda nabad ugu seexdaa.”
Ka xoog badashada cunsuriyadda
Nin la yiraahdo Bambang baa yiri: “Dhallinyaradaydii waxaan ku noolaa danbaab, oo dad ka dhashay qabiil tiro yar aan necbaa baan dulmin jiray.
“Waqti kaddib waxaan bilaabay inaan raadiyo Ilaahay. Raadintaydii waxay ii geesay qolo isla kulma inay bartaan Qorniinka Quduuska ah. Meeshan dhexdeeda waxaa si fiican ii soo dhoweeyay isla qabiilkan necbanaa! Waxaanna arkay inay qoladan dhexdeeda qabiilo kala duwan si xor ah iyo si farxad leh isku dhex jireen. Aad baan u yaabay! Markaas waxaan fahmay aayadda sheegtay: Ilaah dadka ma u kala eexdo ‘laakiin kii kastoo Ilaah ka cabsada, xaqnimadana sameeya, quruun kastaba ha ku jiree, Ilaah waa aqbalaa.’—Falimaha Rasuullada 10:34, 35.
“Maanta ummadna ma cunsuriyeeyo. Qabiilkii aan mar necbanaa bay saaxiibbaday ugu fiican ka dhasheen. Ilaahay Qorniinkiisa Quduuska ah baa i baray inaan dadka jeclaado.”
Bambang imminka dad qabiil kasta ka yimid buu la saaxiibaa
Ka tegidda dulmiga
Nin Garoga la yiraahdo baa yiri: “Anigoo dhowr iyo toban jir ah baa saddex jeer la i xiray laba jeer tuugannimo hal marna nin baan mindi si naxariis laʼaan ah u gal geliyay. Waqti kaddib waxaan ka mid noqday koox dowladda ka soo hor jeeda oo waxaan dilay dad badan. Dagaalkii markuu dhammaaday waxaan madax u noqday qolo dadka baadda. Kor ilaaliyaashayda baa meel kasta ii raaci jiray. Nin dulmi badan oo khatar ah baan ahaa.
Maanta Garoga ma aha nin dulmi badan laakiin waa macallin la ixtiraamo oo dadka baraa Erayga Ilaahay
“Maalin baan aayaddan akhriyay: ‘Jacaylku waa samir badan yahay, waana raxiim, jacaylku ninna ma xasdo, jacaylku ma faano, mana kibro, wax aan u ekayn ma falo, nafsaddiisana wax uma doondoono, mana xanaaqo, sharna kuma fikiro.’ (1 Korintos 13:4, 5) Kelmedahaas qalbigayga bay taabteen. Degmo cusub baan u guuray waxaanna dhigtay Qorniinka Quduuska ah oo talada aan bartay waan yeelay.
“Maanta ma ihi nin dulmi badan. Laakiin imminka waxaan ahay macallin la ixtiraamo oo dadka bara Erayga Ilaahay. Noloshaydu micno bay leedahay oo aad baan ugu qanacsanahay.”
Hadalka Ilaah awood buu leeyahay
Dadkan iyo dad kale oo tiro badan siday noloshoodu u beddelantay baa caddeynaysa aayaddan: “Hadalka Ilaah wuu nool yahay, waana shaqeeyaa.” (Cibraaniyada 4:12) Talada Erayga Ilaahay wax bay inoo tartaa, fahmadeedu ma adka oo xoog bay ina siisaa.
Qorniinka Quduuska ah xitaa adiga miyay ku caawin karaan? Runtii, way kaa caawin doonaan dhibaato kasta ad la kulantid. “Qorniin kastaa wuxuu ku ahaaday Ruuxa Ilaah oo waxtar buu u leeyahay waxbaridda, iyo canaanashada, iyo hagaajinta, iyo edbinta xagga xaqnimada; in ninka Ilaah u ahaado mid dhan oo aad loogu diyaariyey shuqul kasta oo wanaagsan.”—2 Timoteyos 3:16, 17.
Haddaba aan fiirinno casharro laga dhex helo Qorniinka Quduuska ah.
Dadka kor laga hadlay oo noloshoodu beddelantay kee baad ka heshay? Waayo?
Sidee bay Qorniinka Quduuska ah kuu caawin karaan?
Wadaag Wadaag Talo Faaʼiido Leh oo Nolosha Dadka Hagaajisa